बिरालो पाउने बारे Know चीजहरू तपाईलाई जान्नु पर्छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
सम्पादकको पिक 15 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
धेरै जसो बिरालाहरू कम्तिमा २० बर्ष र अझ बढि बाँच्दछन्।
धेरै जसो बिरालाहरू फस्टाउँछन् र लामो समयसम्म बाँच्दछन् जब तिनीहरू घर भित्र बस्दछन्।
बिरालाहरू स्वाभाविक रूपमा जान्दछन् तिनीहरूका कचरा बक्समा जानको लागि जब तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ।
एक बिरालो एक आजीवन प्रतिबद्धता हो, तर यो पशु आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्य को लागी आउँदो वर्ष को लागी संग एक अद्भुत साथी बनाउन सक्छ। यद्यपि तपाईले सुरूमा सोच्नुहुन्न कि तिनीहरू कुकुरहरू जत्तिकै तालिम योग्य छैनन्, तपाई अझै पनि बिरालोलाई प्रशिक्षण दिन सक्नुहुन्छ र यसबाट जति धेरै वफादारी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई बिरालोलाई प्रतिबद्ध गर्नु अघि तयार हुनु मद्दत पुर्‍याउँछ किनकि तपाईं त्यसप्रति वफादार हुन चाहनुहुन्छ जस्तो कि यो तपाईंको लागि हो। तपाईले बिरालो पाउने बारे पाँच उपयोगी सल्लाहहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई तल फेला पारिएको जानकारीमा मद्दतको लागि निश्चित छ।
जब तपाईं एक बिराला पाउनुहुन्छ, तपाईं मा लिन वित्तीय जिम्मेवारी हुनेछ।
१. बिरालाहरू लामो समयसम्म बाँच्दछन्
जब तपाई कुकुर पाउनुहुन्छ, तपाईले यसलाई कम्तिमा १२ देखि १ years वर्ष सम्म कतै बस्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाई कुकुर उमेरबाट पाउनुभयो। धेरै जसो बिरालाहरू यस भन्दा बढि समयसम्म बाँच्दछन्, र तिनीहरू तपाइँसँग कम्तिमा २० बर्ष र अझ बढीमा हुनेछन्। बिरालोले धेरै तनावको सामना गर्न सक्दछ यदि उनीहरूले नयाँ मालिक कहाँ जान्छ भने, यदि तपाई २० वर्ष भन्दा बढी गर्न प्रतिबद्ध हुन सक्नुहुन्न भने यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले कडा सोचिन चाहानुहुन्छ। तपाईले गर्नु पर्छ बिरालालाई प्रदान गर्नुहोस् खाना र यस समय अवधि को लागि आपूर्ति को सबै।
२. बिरालाहरूलाई ध्यान दिनुहोस्
बिरालाहरू कुकुरहरू भन्दा अलि बढी स्वतन्त्र हुन सक्छन, तर तिनीहरूलाई अझै प्रेम र ध्यान चाहिन्छ। जब तपाईंको बिराला तपाईं द्वारा हिंड्दछ, यो सम्भावित ध्यान खोजिरहेको छ, त्यसैले यो केहि मिनेट खर्च को लागी निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो बिरालोसँग दैनिक व्यायाममा खेल्न समय लिनुहोस् यसलाई ध्यान दिन र निश्चित गर्नुहोस् कि व्यायामले यसलाई आवश्यक पार्यो। तपाईंले बिरालोले प्रदर्शन गर्ने ब्यबहारहरू सिक्न शुरू गर्नुहुनेछ जब यसले तपाईंबाट ध्यानाकर्षण चाहन्छ कि जब तपाईं योसँग अधिक समय खर्च गर्न जान्नुहुन्छ।
Your. तपाईको बिरालोको लागि ईन्डोर लिभिंगलाई ध्यान दिनुहोस्
धेरै जसो बिरालाहरू फस्टाउँछन् र लामो समयसम्म बाँच्दछन् जब तिनीहरू घर भित्र बस्दछन्। तिनीहरूसँग केही प्रकारको रोग लिने सम्भावना कम हुन्छ र स्थिर तापमान भित्र स्वस्थ रहनको लागि उनीहरू सक्षम छन्। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले सूर्यको किरणमा पहुँच पाएका छन् जहाँ तिनीहरू ढोका वा विन्डोको अगाडि बस्छन् र त्यहाँबाट प्राप्त भएको न्यानोताको आनन्द लिन सक्छन्। तपाईंको बिरालालाई कुनै पनि सुरक्षा खतराहरूबाट जोगाउनुहोस्, विषाक्त हुनसक्ने बोटबिरुवा, यार्न कि तिनीहरूले आफैं आफैलाई गलाउन सक्नेछन्, र अधिक।
C. बिरालाहरू वित्तीय जिम्मेवारीको साथ आउँछन्
जब तपाईं एक बिराला पाउनुहुन्छ, तपाईं मा लिन वित्तीय जिम्मेवारी हुनेछ। तपाईंले आफ्नो बिरालोको लागि खानपिन र व्यवहार गर्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्नेछ र बाहिरबाट खानको लागि यसमा कचौरा छ। तपाईंको बिरालालाई पनि खेलौनाहरू चाहिन्छ ताकि तपाईं चाहानुहुन्छ यो खेल्न सक्नुहुनेछ, वा खेलौनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ जसले बिरालालाई आफ्नै खेलमा अनुमति दिन्छ। अन्तमा, त्यहाँ चिकित्सा लागतहरू जस्तै नियमित चेक अप र खोपहरू र आपतकालीन पशु चिकित्सक सेवाहरू पनि आवश्यक पर्दछ।
एउटा बिराला तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि एक अद्भुत पाल्तु जनावर हो जुन सबैलाई पक्का छ।
C. बिरालाहरूलाई एक प्रभावशाली लिटर बक्स चाहिन्छ
बिरालाहरू स्वाभाविक रूपमा जान्दछन् तिनीहरूका कचरा बक्समा जानको लागि जब तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। तिनीहरूसँग हुनु पर्छ ठूलो कचरा बक्स ताकि तिनीहरू यसमा आरामदायक हुन सकून् र खाली स्थानमा उनीहरूको व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंले बाकस एक निजी ठाउँमा छ कि छैन पक्का गर्न आवश्यक छ ताकि बिरालोले यसलाई सुरक्षित प्रयोग गरीरहेको छ र उनीहरूले प्रयोग गर्नुपर्दछ। दिनको कम्तिमा दुई पटक यसलाई सफा गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ता कि जनावरहरूलाई सँधै सफा महसुस गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त हुनेछ।
एउटा बिराला तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि एक अद्भुत पाल्तु जनावर हो जुन सबैलाई पक्का छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग उचित आपूर्ति छ र तपाईं आवश्यक वित्तीय देखभालहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसलाई आवश्यक उचित हेरचाह प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यसले धूप र स्नेहको प्रशस्त पहुँच पाएको छ यदि यो एक इनडोर बिरालो हो र यो लामो र स्वस्थ जीवनको लागि निश्चित छ। बिरालाहरू कम्तिमा दुई दशकको लागि प्रतिबद्धता हुन्, त्यसैले यो निश्चित हुनुहोस् कि तपाइँसँग तयार हुनुहुन्छ र लामो अवधिको लागि हेरचाह गर्नुहोस्।
बिरालो सांप्रदायिक समाचार परिवार पीईटी
म्याकेन्जी तपाईको विशिष्ट मिडवेस्टर्न ग्याल हो। जब उनी लेख्न वा पढिरहेकी छैनिन, उनी उनको अर्को आधा म्याराथनको लागि प्रशिक्षण फेला पार्न सक्छिन्, केहि मिठो पकाउँछिन्, उनको गितार बजाउँछिन्, वा उनको गोल्डन रिट्रीभर कूपरको साथ समातिन्छन्। उनी फुटबल, गिरावटको मौसम, र लामो सडक यात्राहरू हेर्न मन पराउँछन्।
कसरी 5G प्रभाव व्यवसाय शिक्षा
भारतमा स्टार्टअप शुरू गर्नु त्यति गाह्रो कुरा होइन यदि तपाईंसँग सही जानकारी छ भने
हेडलेस वाणिज्य - अनलाइन बिक्रीको भविष्य अब छ
विशेषता कफी पेय तपाईं घर बनाउन सक्नुहुन्छ